Tiako i Madagasikara Lasa i Donnat, miditra i Olga
Solombavambahoakan’Ampanihy Andrefana Tsy laharam-pahamehana ny fangatahana fiara 4x4
Taorian’ny fifidianana ireo birao maharitra teny amin’ny Antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza,
Antenimierandoholona Hetsika maro no hanamarihana ny faha-60 taona
Omaly alatsinainy 22 hatramin’ny sabotsy 27 jolay ho avy izao no hankalazana amin’ny fomba ofisialy ny faha-60 taonan’ny Antenimierandoholona.
Famafazam-bola amin’ny fifidianana Afa-bela hatrany ny mpividy fahefana
Manjaka eto Madagasikara ny aferafera maloto sy ny zavatra tsy mangarahara izay ny mpitondra no lohalaharana amin’izany.
Jean-Jacques Rabenirina "Mila fanatsarana ny kalitaon'ny asa fanaovana lalàna"
"Maniry ny fanamafisana fiaraha-miasa eo amin'ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona indrindra eo amin' ny kalitaon'ny asa",
Serge Zafimahova–Dinike “Ataovy aloha ny fifidianana lalàmpanorenana”
Tsy tokony hotanterahina aloha ny fifidianana kaominaly sy ny Ben’ny tanàna, hoy i Serge Zafimahova avy amin’ny vovonana Dinike, fa ny fifidianana lalàmpanorenana aloha no tokony hatao voalohany,
Adin’ny samy manampahefana Atao hazalambo i Rivo Rakotovao
Nambaran’ny fahampahalalam-baovao mpanohana ny fitondrana omaly, fa manao fanjakana kely ao anaty fanjakana be ny antenimierandoholona ary mifanohitra amin’ny sata Repoblikanina ny fanamarihana ny faha-60 taonan’ity andrim-panjakana ity,
Lalàna mifehy ny fanoherana Misy zavatra mbola hokitihina indray
Hisy fivoriana manokana avy hatrany eny amin`ny Antenimieram-pirenena ka ny lahadinika dia ny hanitsiana ny lalàna n°2011-013 natao tamin’ny 9 septambra 2011 izay mifehy ny satan’ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra.
Voatendry ho sekretera jeneralin’ny Antoko Tiako i Madagasikara Rtoa Olga Ramalason taorian’ny fametraham-pialan’Atoa Olivier Donnat Andriamahemfaparany ny 6 febroary lasa teo.
Ny zaikabem-pirenena nasionaly nataon’ny antoko ny 22-23 mey 2015 tao amin’ny Magro Ankorondrano no nanendry ity farany ho sekretera jeneraly tamin’izany. Noho ny hamehana taorian’iny fametraham-pialany iny no nanendren’ny filoha nasionaly sady mpanorina ny antoko TIM Marc Ravalomanana rehefa nifandinika tamin’ny Birao politikan’ity loholon’i Madagasikara ity handray io toerana io voinjimaika mandra-pahatonga ny zaikabem-pirenena izay atao isaky ny 5 taona, araka ny sata mifehy ny antoko. Mety amin’ity taona ity na amin’ny taona ho avy no hanaovana azy io. Miaina ny antoko ary atao izay mampandeha azy, raha ny nambaran’i Marc Ravalomanana tamin’ny fanambarana ofisialy izao vaovao izao omaly teny amin’ny foiben-toeran’ny TIMK25. Ben’ny tanànan’Antsirabe teo aloha in-droa nisesy dia ny 2003-2011, minisitry ny varotra sy ny fanjifana teo aloha, loholon’i Madagasikara am-perinasa,… no nahafantarana azy. Manana mari-pahaizana samihafa toy ny “Diplôme de 3éme Cycle en Managament d’Entreprise tao amin’ny INSCAE, Diplôme d’Ingénieur Agronome, … » ny tenany. Kihon-dàlana vaovao sy fanamafisana ny herin’ny antoko izao. Nisaotra manokana an’i Marc Ravalomanana tamin'ny fitokisana napetraka aminy ity sekretera jeneraly vaovaon’ny TIM ity, ary nanome toky ny rehetra fa tsy handraraka ilo mby an-doha amin’ny adidy goavana iantsorohany. Manana andraikitra lehibe eo anivon’ny TIM satria tompon’andraikitra voalohany mpanatanteraka izay hampandrosoana ny antoko eo amin’ny lafiny rehetra mihitsy, hoy izy. Ny fifidianana depiote no ady lehibe voalohany miandry, ka tsy maintsy hiezaka ny antoko hampandany izay solombavambahoaka napetrany satria manana eo amin’ny 109 eo izahay, ka tsy maintsy hanao izay hampandresena an’ireo, hoy ity sekeretera jeneraly vaovaon’ny TIM ity. Ao anatin’ny fanajana ny lalàna tanteraka ny fampahafantarana ireo kandidan’ny TIM, ary ao anatin’ny fametrahana fifampitokisana amin’ny vahoaka fa tsy mba manaotao foana ny antoko, hoy izy. Manana ny paikadiny i Marc Ravalomanana, izay efa naneho fa tsy mbola afaka miteny firy izao satria tsy tapitra tanteraka ilay 100 andro. Rehefa tapitra dia tena hiteny aho, ary manomboka eo ihany koa ny fampielezan-kevitra ka ho avy aho, hoy ny fanehoan-keviny.